टायर रबर पुनर्चक्रिया उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासाउन्ड को साथ - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
फोहोर टायर रबर एक विषाक्त, गैर-जैव उत्पादन योग्य सामग्री हो जसले यसको निपटानलाई वातावरणीय र आर्थिक समस्या बनाउँछ। फोहोर टायर रबरलाई रिसायकल गर्नको लागि अल्ट्रासोनिक डिभुलकेनाइजेसन एक छिटो र प्रभावकारी विधि हो जसले फोहर टायरहरू पुनः प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। अल्ट्रासोनिक टायर रबर पुनर्चक्रण अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया हो, जुन सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ। अल्ट्रासोनिक टायर पुनः साइकलिंगको रैखिक प्रक्रिया स्केलेबिलिटीले आर्थिक लागतमा औद्योगिक मापनमा ठूलो मात्राको उपचार गर्न सम्भव बनाउँदछ।
रबर फोहोरको समस्या
फोहर टायर रबरले उनीहरूको विषाक्तता र गैर-अवनतीको कारणले महत्वपूर्ण वातावरणीय समस्या निम्त्याउँछ। तिनीहरूको वल्कानाइज्ड क्रसलिंक कार्बन संरचना र विषाक्तताले विस्थापनलाई वातावरणीय बोझ बनाउँछ। परम्परागत रबर रिसाइक्लि techniques टेक्निक एकैनामी हुन्छ, वातावरणीय अनुकूल छैन, र रिसाइल गरिएको रबरको साथ उत्पादन गरिएको नयाँ रबर सामग्रीले कम गुणस्तर देखाउँदछ किनकि फोहोर रबरको मुख्य पोलिमरिक चेनहरू परिवर्तन र कमजोर भएकाले।
टायरहरू सबैभन्दा समस्याग्रस्त फोहोर स्रोतको हिस्सा भएकाले वातावरणीय मैत्री र आर्थिक विधि वा रिसाइक्लिंग आवश्यक छ। पायरोलिसीस र डिभल्केनाइजेसन टायरहरूको लागि सबैभन्दा सफल रिसाइक्लि processes प्रक्रियाहरू हुन्। टायर रबरको वातावरणीय भार रोक्नको लागि फोहर टायर रिसाइक्लि inमा भएको प्रगति आवश्यक छ र ल्यान्डफिल्समा डम्पि t टायर घटाउन मद्दत गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक उपचारले दुबै आधुनिक टायर रिसाइक्लि processes प्रक्रिया, पाइरोलिसिस र डिउल्केनाइजेशन तीव्र गर्न र सुधार गर्न सक्दछ।
फोहोर रबरको डिभल्कनाइजेसनको लागि अल्ट्रासोनिक प्रणाली
तातो इलिस्टोमरमा जोडी सोनिकेशन गर्न एक्स्ट्राडर ब्लक अनुकूलित गर्नुहोस्
टायर रबरको अल्ट्रासोनिक Devulcanization
अल्ट्रासोनिक डिउल्केनाइजेशन द्वारा, टायरमा सल्फर-सल्फर र सल्फर कार्बन रासायनिक बन्धनहरू डेक्रोस्लिन्क्ड हुन्छन्, जसले नम्र रबर पग्लन्छ। यो अल्ट्रासोनिकली रूपमा उत्पन्न रबर पिघल पुनःप्रक्रिया र नयाँ रबर उत्पादनहरु मा ढाल्न सकिन्छ, जस्तै नयाँ टायर। अल्ट्रासोनिक डिभल्केनाइजेसनको ठूलो फाइदा भनेको कम गर्मी आवश्यक हुन्छ। पहिले, फोहोर टायर पार्ट्स लगभग तताइन्छ। º००ºF वा २००ºC, त्यसपछि एक फ्लो सेल मार्फत स्क्रू फिडरमा खुवाउँदछ, जहाँ फोहोर रबरलाई उच्च दबावको साथ उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक्सको साथ Sonhet गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक डिभल्केनाइजेसनको क्रममा रबर पहिलेको ठोस अवस्थाबाट अत्यधिक चिसो पदार्थमा परिणत हुन्छ। तीव्र अल्ट्रासोनिकेसनले वल्कानाइज्ड इलिस्टोमर्सको त्रि-आयामी नेटवर्क छिटो तोड्दछ। रासायनिक बन्धनलाई डिक्रॉसलिinking्क गर्ने अल्ट्रासोनिक उपचारले केहि सेकेन्ड लिन्छ। Sonated रबर पग्लन उपचार एजेंटहरू र फिलरहरूको साथ प्रबल गर्न सकिन्छ र नयाँ रबर उत्पादनहरूमा मोल्ड गर्न सकिन्छ।
पाइरोलाइटिक अवशेषको अल्ट्रासोनिक अपग्रेड
पाइरोलाइटिक अवशेषहरूलाई हाइड्रोक्लोरिक र हाइड्रोफ्लोरिक एसिडमा सोनिकेट गरेर अपग्रेड गर्न सकिन्छ ताकि पायरोलिटिक कार्बन कालो प्राप्त गर्न। अल्ट्रासोनिक उपचारले सफलतापूर्वक पाइरोलाइटिक अवशेषहरूलाई अपशिष्ट टायरबाट उच्च मूल्यमा थपिएको वाणिज्यिक कार्बन कालोमा अपग्रेड गर्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक पोस्ट-पायरोलिसिस उपचार जसले गर्दा फोहर टायर पाइरोलिसिसको समग्र दक्षतामा उल्लेखनीय सुधार आउँदछ।
जब उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू आउँदछन् तब हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स तपाईंको अनुभवी साझेदार हो। अल्ट्रासोनिक डिभुलकेनाइजेसनलाई उच्च शक्ति औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको आवश्यक पर्दछ, जुन उच्च दबाव र उच्च तापमान सर्तहरूमा काम गर्न सक्दछ। अर्को आवश्यकता धेरै उच्च आयामहरूको वितरण हो। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि पनि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। हिल्सचरको उच्च-चाप / उच्च-तापमान सोनोट्रोडहरू निर्मित प्रक्रियाको मांगका सर्तहरूको लागि निर्मित र ट्युन गरिएको छ। अनुकूलित मर्नेसँग अल्ट्रासोनिक हर्न (सोनोट्रोड) एक्सट्रुडर ब्यारेलमा छिराइन्छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ heavy/7 अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ। उच्च प्रदर्शन र विश्वसनीयता हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू रबर पुनःनिर्माणको घोडामा बदल्छ!
कृपया फोम टायर रिसाइक्लि forको लागि हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईंसँग तपाईंको प्रक्रियाको बारेमा छलफल गर्न र तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्न खुशी हुनेछौं! अब अधिक जानकारी र मूल्यहरू पाउनुहोस्!
ह Hongक, चांग-कुक; इसायेव, एआई (२०० 2003): रबर पुन: प्रयोगका लागि उच्च-शक्ति अल्ट्रासाउन्डको अनुप्रयोग। कोरियाको रबर समाज: ईलास्टोमर्स र कम्पोजिट भोल 38 38, मुद्दा २; २००.। १०3-१११।
वाल्भेकर, रश्मि; मोहम्मद अफीक, जल्कफ्लाइ; रामराद, सुगन्ती; कालिद, सिद्दीकी (२०१ 2018): अमाइन आधारित घोलक र अल्ट्रासोनिक उर्जा प्रयोग फोहोर टायर रबरको डिभल्कनाइजेसन। MATEC कन्फरेन्स भोल्युमको वेब। १2२, २०१।।
भल्कानाइजेशन प्राकृतिक रबर बनाउनको लागि प्रक्रिया हो, जससँग कम टिकाऊपन र लचिलोपन, कडा र टिकाऊ हुन्छ। तसर्थ, प्राकृतिक रबर तताईन्छ र सल्फर जोडेर पोलिमरहरू बीच हासिल गरिन्छ। पोलिमरिक रबर अणुहरूलाई क्रसलिinking्क गरेर, तथाकथित पालिसोप्रिन्स, सल्फर परमाणुहरूद्वारा एक अर्कामा गाँसिएको हुन्छ। वल्कानाइजेशन मार्फत तथाकथित वल्कानाइज्ड रबर उत्पादन गरिन्छ, जसले उच्च प्रदर्शन र टिकाऊपन प्रदान गर्दछ। भल्कानाइज्ड रबर टायर, रबर होज, जुत्ता तल, खेलौना आदिमा पाउन सकिन्छ।
Devulcanization क्रसलिink्क संरचना, विशेष गरी सल्फर-सल्फर र / वा कार्बन-सल्फर बन्ड खाली गरिएको एउटा टेकनीक हो। यो विभिन्न विधिहरू जस्तै मेकानो-रसायन, रसायनिक, जैविक, र उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिकेसन प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ।
रबरलाई इलास्टोमर्स पनि भनिन्छ। इलास्टोमर लोचदार पोलीमरको लागि एक संक्षिप्त नाम हो। इलास्टोमर्सले भिस्कोएलास्टिक विशेषताहरू प्रदर्शन गर्छन्: ती टाँसिएका, धेरै लोचदार पोलीमरहरू हुन्। रबर शब्द प्रायः इलास्टोमर्सको समूह छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ जुन उपयोगी हुनको लागि वल्कनाइज वा क्युरि। हुनुपर्दछ।
टायर रबरले बनेको के हो?
टायर रबर (अमेरिकी अ English्ग्रेजी) वा टायर रबर (ब्रिटिश अ English्ग्रेजी) रबर, फिलरहरू र अन्य योजकहरू सहित थुप्रै कम्पोनेन्टबाट बनेको हुन्छ। टायर रबर प्राकृतिक रबरमा बनिएको हुन्छ, ल्याटेक्स सुपबाट बनेको हुन्छ, जुन रबरको रूखको बोक्राबाट वा कृत्रिम रबरबाट गुप्त हुन्छ। कृत्रिम रबर पेट्रोलियम बाट बनेको छ। सब भन्दा साधारण सिंथेटिक रबर फार्महरू हुन् स्टायरिन-बुटाएडिन रबर (SBR), पॉलीबुटाडाइन रबर, र बुटाइल रबर। जबकि रबर टायरको मुख्य घटक हो, फिलरहरू र योजकहरू अधिक कार्यशील टायर सामग्री निर्माण गर्न एकीकृत हुन्छन्। कार्बन कालो र / वा सिलिका टायर कम्पाउन्ड सुदृढ पार्न धेरै सामान्य टायर फिलरहरू हुन्। कार्बन कालो र सिलिकाले पक्राउ बढाउँदछ, नर टायरहरू पन्क्चरहरू विरुद्ध अधिक प्रतिरोधी हुन्छ र टायरको रोलि resistance्ग प्रतिरोध क्षमता कम गर्दछ। एन्टिआक्सिडन्ट्स, एन्टिजोन्ट्स र एन्टी-एजिंग एजेंटहरू अन्य additives हुन्, जो टायरको गुणस्तर सुधार गर्दछ र टायरको आयु बढाउने गर्दछ।